बेरोजगारी रोजगार | Hamrolibrary
मैले पहिलोपल्ट जागिरको खोजीमा एउटा विद्यालयमा जाँदा, त्यहाँ मलाई मेरो अनुभवको बारेमा सोधियो। मैले न्यासर्याक्क पर्दै भने, ” मैले अहिलेसम्म कतै पढाएको छैन । आवस्यकताले ठेलेपछी दसतिर कुदेपनि खुट्टा थाक्दैनन् । एकपछि अर्को स्कुल पसें, हात मा आफ्नो वायोडाटा बोक्दै । कतै अनुभव खोजेर फर्काए मलाइ त कतै उमेर देखेर । सायद स्कुल कै विद्यार्थी भगाइदेलाकि भन्ने डर नि रह्यो होला ऊता हेडमास्टर ज्युहरुलाई । स्वभाविक नै हो, जवान अविवाहित व्यक्ति काम माग्दै आएपछि । पाँचौ स्कुल मा प्रवेश गरें , अनि हेडसर को अफिस को ढोका ढक्ढक्याँये । “आउनुहोस् , के सेवा गरौँ ?” वहाँले भन्नुभयो । ” हजुर , म यहाँ भ्याक्यांसी छ कि भनेर बुझ्न आएको “, मैले भने । वहाँले सबै कुरा सोध्दै जानुभयो , मैले भन्दै गएँ । त्यो एउटा अन्तर्वार्ता जस्तै थियो । म नम्र भएर जवाफ दिदै थिएँ । त्यसपछि वहाँले पनि झटारो हान्नुभयो, ” अन्त कता कता पढाउनुभएको छ ? ” फेरी यहाँ पनि यहि प्रश्न आएपछि म ढुक्क भएँ , “यहाँ पनि काम नपाइने भैयो ।” काम नपाइने निश्चित भएपछी जे भने नि भैगयो नि भन्ने दिमाग मा लाग्यो । एकछिन चर्केर बोल्न प्रेरणा मिलेजस्तो भयो । अनि मैले पनि झटारो हानिगएं , ” तपाइँले पहिलोपल्ट काम खोज्दा , तपाइँसँग के अनुभव थियो ? तपाइँलाइ कुन अनुभवका आधारमा काम प्राप्त भयो ? तपाइँ कुन कुन स्कुल मा पढाउनुहुन्थ्यो ? अरु कुन कुन स्कूल मा प्रिन्सिपल भएर काम गर्नुभएको थियो ? ” आदि इत्यादि । वहाँ मौन रहनुभयो । वहांसंग जवाफ नै थिएन । म एउट २२ वर्षे योग्य बेरोजगार युवक जस्ले भर्खरै मात्रै व्याचलर डिग्री सकेको थिएँ । एकछिन अफिस सान्त रहयो । त्येस्पछी म उठेर हिड्न खोजें । त्येहिबेला प्रिन्सिपल सर को मनमा के कुरा खेल्यो कुन्नि, वहाँले मलाइ, सर एकछिन, भनेर रोक्नुभयो । म फेरी बसें । ” ३ वटा क्लास खालि छ सर, हजुर को एउटा नमुना क्लास हेरौंनत, अनि विचार गरौंला ” वहांले भन्नुभयो । मैले हुन्छ भनेँ । त्येसपछि मैले क्लास पाएँ । आज मैले पढाउन थालेको केहि वर्ष भयो । अब कतै अन्त पढाउनुपर्दा मसंग अनुभव छ । तर, मजस्ता योग्य २२ वर्षे नयाँ बेरोजगार युवा युवति यहाँ अनगिन्ति छन् । उनीहरुका बारेमा कसले सोच्ने ? आफ्नो पढाइ को एउटा पाटो नसकिदै, कून नयाँ व्यक्तिसंग अनुभव हुन्छ ? “अण्डा पहिला कि चल्ला ? ” भनेजस्तै, काम नपाइ/ नगरी अनुभव हुदैन , र अनुभव नभैकन काम पाइदैन । यो दुइटा को लडाइमा कून पहिला जितिन्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन । पत्रिकामा विज्ञापन खुल्छ , ” एक उत्क्रिस्ट कम्पनिमा रोजगारको सुवर्ण अवसर; तलव आकर्षक ; योग्यता- बि ए पास ; अनुभव – ७ वर्ष ; उमेर- २० पुरा भइ २५ ननाघेको ।” यो हिसाब ले, त्यो पेशा मा आबद्ध हुनका लागि कुनै यस्तो अध्भुत व्यक्ति चाहियो , जसले १३ वर्षमा बि ए पास गरेर काम गरेको ७ वर्ष भैसकेको र २० वर्ष पुगेको होस् । यो कून किसिमको माग हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्न । सायद त्यो कम्पनिको संचालक त्यस्तै अध्भुत व्यक्ति रहिसकेको हुनुपर्छ । जे सुकै होस्, काम पाउने ले पाएकै छन्, नपाएकाहरुको लागि किन टाउको दुखाउने ? हैन?
By GP Chudal ( M.A in Economics )
पाठ – पाँच “भलाद्मी” -लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
Previous Article Difference between fixed cost and variable cost
Next Article पाठ : एक “नेपालै नरहे”- माधव घिमिरे